Mkpa mmanụ diffuser Dugara Light N'ogbe | AromaEasy
Mbido / shop / Esi ísì ụtọ / Osisi diffuser
Ihe ntanetị ọkụ anyị nwere akụkụ atọ nwere okike nwere akụkụ atọ - ị nwere ike ịnụ ụtọ ọkụ ọkụ na-agbanwe agba site n'akụkụ ọ bụla. Igwe na-atọ ụtọ ma na-acha ọkụ ọkụ na -emepụta gburugburu ala ma nwee ike iji ya dị ka abalị. Na mkpọtụ Mbelata technology, a aromatic ngwaọrụ diffuses ọkacha mmasị gị mkpa mmanụ nwayọọ.
Mgbe ị na-ahọrọ ihe mgbasa a, ọ bụghị naanị na ị na-arụ ọrụ igwe; ị na-ahọrọ ntinye aka ịkpụzi oghere nkeonwe gị.
SKU: A015 Categories: All Products, Esi ísì ụtọ, Osisi diffuser
mkpa mmanụ diffuser ada ìhè
ihe: ABS / PP / PC
Mmepụta Echiche: 30-45ml / hr
Mpaghara mkpuchi: 21-30m²
Ogologo ubochi: 1-1.5m ogologo
Size Product: D270 * 170mm Ibu ibu: 400g
Mbukota Size kwa otu: 170 * 170 * 277 mm Mbukota ibu kwa nkeji: 761g
User Manual Onye nyocha AC
Njirimara nke Ikanam Light Mkpa Oil Diffuser
Ike ukwu na oke iwe
Nnukwu mmiri 500ml na-enye ohere maka elekere asatọ nke igirigi na-aga n'ihu, na-echekwa oge gị site na imeju mmiri ma ọ bụ mmanụ dị mkpa ugboro ugboro.
Ultrasonic alụlụ na-ewepụta alụlụ mmiri nke na-agbakwunye mmiri na ikuku iji gbochie nsị nke ntụ oyi na ikpo ọkụ.
O nwekwara ike inye aka belata mgbaàmà nrịanrịa, dịka ịmịpụ, imi na iku mmiri.
Atọ Nhọrọ Oge
Gụnyere nhọrọ oge nkwụsị 3 (awa 1/3 awa / 6 awa), onye mgbasa a dabara na usoro ndụ gị nke ọma.
Nwere ike ịtọọ oge iji mechie onye mgbasa ozi gị na-enweghị nsogbu gbasara edemede na ịgbanye ya n'abalị.
Mgbe mmiri na-ezughi oke, mgbasa ga-akpaghị aka.
Ọ bụ ezie na agba mbọ ọ bụla iji hụ na izi ezi nke onyonyo ngwaahịa na ozi ahụ, agba ndị gosipụtara site na kọmputa dị iche iche na-adị iche na mgbanwe metụtara ngwaahịa a ka nwere ike ịche na weebụsaịtị anyị.
Anyị nwere ekele maka nghọta gị ma na-akwado gị ka ị gụọ ntụziaka nke ngwaahịa niile tupu iji ya.